Njalo iHhovisi Lasekhaya Lidinga Eyodwa! | Martech Zone
Esikhathini esingaphezu konyaka odlule (2005) ngangenza ukubonisana okuningana ohlangothini futhi ngidinga ukuthola i-hardware entsha ngasekhaya ukuyisingatha. Ngathenga ikhompyutha entsha, i-netgear new wireless router namakhadi angenazintambo… futhi imali engcono kakhulu ebengiyi-LinkStation yami.
I-LinkStation ixhuma ngqo kumzila wami ongenantambo futhi ine-250Gb yesikhala. I-interface yomsebenzisi ye-LinkStation ilula impela… ngikwazile ukusetha idrayivu yengane ngayinye yami, ikhompyutha yami, umkhombandlela womculo ophakathi nendawo, kanye nesipele samakhasimende. I-LinkStation iphinde yafika ne-USB lapho izokwabelana khona ngephrinta, isoftware ye-FTP, kanye nesoftware yokusakaza imidiya. Lokho kungivumela ukuthi ngibeke iphrinta yami kude namakhompyutha futhi kwenye indawo elula.
Isici sami engisithandayo, noma kunjalo, sinesikhala esiningi kude nama-PC ami nomthombo wenethiwekhi. Noma nini lapho ngiqeda iphrojekthi, ngangiyikopisha laphaya. Noma nini lapho ngilanda futhi ngifaka isoftware, ngangikopisha lapho, futhi noma nini lapho ngifuna ukwabelana ngezinto phakathi kwamakhompiyutha - simane sidlulisele amafayela kusabelo phakathi kwawo wonke. Awekho 'amasheya efolda', awekho amadiski okufaka, awanankinga nhlobo.
Cishe ezinyangeni eziyi-7 ezedlule, i-PC yami yavalwa ngokuphelele yi-Norton Antivirus update eyasusa umkhakha webhuthi. Bekufanele ngiphinde ngiguqule kabusha idrayivu futhi ngilayishe kabusha yonke into kusuka ekuqaleni. Kungenzeka kube yiphupho elibi ngokuphelele ngaphandle kwalokhu enginakho konke ilayishwe kumadrayivu wenethiwekhi. Ngangibuyele emuva ngosuku noma ngaphezulu futhi angizange ngiphuthelwe ukushaywa.
Ngemuva konyaka nohhafu futhi manje elinye lamakhasimende ami langicela ukuthi ngimenzele okunye ukuphindaphinda. Bekuyisikhathi eside kangangoba bengingasalayishiwe nokufakwa kwezicelo. Ngempelasonto edlule, ngigxumele esabelweni futhi ngilayisha kabusha izicelo. Kule mpelasonto, ngilande ukuhlaziywa okudala futhi ngakwazi ukukhipha ukuhlaziywa kule ntambama. Ukuzifundisa kabusha ngesicelo bekuyingxenye enzima kunazo zonke!
Ngakho-ke - nazi ezinye izeluleko zochwepheshe nabacoshelanayo ngokufanayo abenza umsebenzi omningi kumakhompyutha abo:
Faka imali kudivayisi yokugcina inethiwekhi.
Sebenzisa idivayisi yesitoreji senethiwekhi. Njalo uma uthola ithuba, kopisha umsebenzi owenzayo kuwo.
Kopisha ukufakwa kwesoftware, izibuyekezo, izibuyekezo zabashayeli, nezinombolo ze-serial kusabelo. Lokhu kubeka konke ngokuphepha ezindaweni ezimbili.
Into enhle ngokulondolozwa kwenethiwekhi ukuthi asikho isipele futhi sibuyisela isikhathi esidingekayo… mane ukopishe amafayela uwafake kudrayivu, usheshe ngale ndlela. (Nginazo izipele ze-PC ngayinye phezu kwayo).
Futhi uma ngabe ubuzibuza, iMac ibona ukuthi nayo yonke into ihamba kahle! Ngisho nephrinta eyabiwe!
Tags: Isipeleisixhumanisiidivayisi yokugcina
Dec 4, 2006 ngo-9: 32 PM
Nami ngingumlandeli omkhulu wedivayisi ye-LinkStation. Nginenguqulo engu-160GB ngokwami ​​futhi ibisebenza ngamandla iminyaka ecishe ibe ngu-2 manje. Into enhle kakhulu ukuthi ngenxa yemvelo yokusebenza kwayo, akukho sondlo noma ukunakekelwa nokuphakelwa okudingekayo.
Dec 4, 2006 ngo-10: 49 PM
Ngemuva kokuthenga okwami, umngani wami uthenge uhlobo lwe-1Tb. Nganginomona! Uyabathanda nabakhe. Ngiyafuna ukwazi ukuthi kungani othile engakayakhi iphrinta / i-harddrive / i-wireless router okwamanje.